Selling Care: Becoming A Top Insurance Agent (ထိပ်တန်းအာမခံ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်ဖြစ်စေဖို့) - Better Version
Selling Care: Becoming A Top Insurance Agent (ထိပ်တန်းအာမခံ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်ဖြစ်စေဖို့)
March 15, 2022 2022-04-20 20:51
“စျေးရောင်းတာထက် ပိုတဲ့ အာမခံရောင်းခြင်း”
အာမခံလုပ်ငန်းဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်း ခေတ်စားလာတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး လူတော်တော်များများရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကိုလည်း ရရှိထားပါတယ်။ အာမခံဝန်ဆောင်မှုတွေ လူကြိုက်များလာတဲ့နဲ့အမျှ အာမခံကိုယ်စားလှယ် (Insurance Agent) တွေရဲ့ Role ကလည်းအရေးပါလာပါတယ်။
အာမခံဆိုတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုက အတင်းထိုးရောင်းလို့ မရပါဘူး။
ကြက်ဥတစ်လုံး ကိုင်ထားရသလို တစ်ဖက်၀ယ်သူရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား၊ လိုအပ်ချက်၊ စကားအသွားအလာ စတာတွေကို အရိပ်တစ်ခုလိုနင်းပြီး အကွက်ကျကျ ရောင်းရတာပါ။ရောင်းတာတင်မဟုတ်သေးဘူး။ ဝယ်သူက ငြင်းလိုက်တဲ့အခါ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ?
၀ယ်သူနဲ့ ရေရှည်ဘယ်လို ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရမလဲ?
ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Result ရဖို့ ဘယ်လို ဗျူဟာတွေသုံးမလဲ? ဆိုတာတွေကလည်းအင်မတန် အရေးပါပါတယ်။
Better Version မှ မိတ်ဆက်ပေးမယ့်သင်တန်းလေးကတော့ ထိပ်တန်းအာမခံကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်လာစေဖို့
“Selling Care: Becoming Top Insurance Agent” ဆိုတဲ့ သင်တန်းလေးပါ။
ဒီသင်တန်းလေးက ထိပ်တန်းအာမခံကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အသေးစားနဲ့ အလတ်စား ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊လူငယ်တွေ၊ အာမခံလုပ်ငန်းကို စတင်ပြီးလုပ်ကိုင်ချင်သူတွေအတွက် အထူးဒီဇိုင်းဆွဲထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိပ်တန်းအာမခံကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ချင်သူအနေနဲ့မဖြစ်မနေတက်ထားသင့်တဲ့ သင်တန်းဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
***ပုံမှန်သင်တန်းကြေး ၉ သောင်းကိုမှ ပထမဦးဆုံးအပ်တဲ့ (၁၀) ယောက်စာအတွက် အထူးစျေးနှုန်း ၅၅,၀၀၀ ပဲ ကျမှာဖြစ်ပါတယ်။
🔥သင်တန်းသားတွေ အဆင်ပြေစေဖို့ “Payment Installment Plan” တွေလည်းထားရှိပေးထားပါတယ်။
🔥Company များအတွက် Corporate rate နဲ့ အထူးစျေးနှုန်းရှိပါတယ်။
သင်တန်းစမယ့်ရက်၊ အချိန်နဲ့ သင်ခန်းစာ အသေးစိတ် စုံစမ်းဖို့အတွက် “BTA” လို့ မက်ဆေ့ ပို့လိုက်ရုံပါဘဲ။
Instructions and Suggesstions
Selling Care Becoming Top Insurance Agent
Module 1 : The Concept of Insurance & Its Evolution
Two major classes of Insurance
Module2: Insurance Agent asaCareer
Insurance Market Penetration in Myanmar
Qualities required to becomeaSuccessful Insurance Agent
Module3: Selling Process
Ethics ofaSalesperson
Mistakes ofaSalesperson
7 Steps of Selling Process
How do we find prospects ?
Goal Setting & How many prospects to meet inayear?
5 Types of Salesman Position
Module4: Communicating to the Heart of Customers
Mistakes in Listening
Understanding Customer Criteria….
Module 5: Selling Through Asking Questions
OPEN Question Selling Technique _ “O”
OPEN Question Selling Technique _ “P”
OPEN Question Selling Technique _ “E”
OPEN Question Selling Technique _ “N”
Module6: Personality Types
Why Personality Types Important?
How to sell to different personality type
How to sell Amiable
How to sell Analytics Personality
Module 7: Overcoming Objections & Sales Closing Techniques
5 Types of Objection
How to reduce objection
2 Ways to Increase your Sales
Richard Nay Lin
ဒေါက်တာထွန်းနေလင်း ကို ၁၉၈၂ တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ဖွားမြင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၆ တွင် ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန် မှ ဆေးပညာဘွဲ့ ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၁ အထိ Zifam Pinnacle Pty Ltd ဆေးကုမ္ပဏီတွင် Product Executive ရာထူးဖြင့် အရောင်းဝန်ထမ်းများအား Product Training ပေးခြင်း ၊ အမြို့မြို့အနယ်နယ်မှ ဆရာဝန်များအား Product Presentation များပြုလုပ်၍ ဆေးဝါးပစ္စည်းများ မိတ်ဆက်ခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး Sales နှင့် ပတ်သက်သော ပညာရပ်များကို အဆိုပါ ကုမ္ပဏီတွင် စတင်ထိတွေ့ လေ့လာခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၂ မှ ယနေ့အထိ Happy Holidays Travel & Tours အမည်ဖြင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းကို တည်ထောင်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး အရောင်းပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများကို ပိုမိုရရှိလာခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၈ မှ ယနေ့အထိ Happy Fitness Store အမည်ဖြင့် Gym အားကစားပစ္စည်းများကို ပြည်ပမှတင်သွင်းရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းကိုလည်း ထပ်မံ တည်ထောင်ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းမှာ ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်လျက်ရှိပါသည်။ တဖက်တွင် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသလို ၂၀၂၀ မှ စတင်၍ အာမခံလုပ်ငန်းနယ်ပယ် သို့ စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် အမေရိကန်အခြေစိုက် CHUBB အာမခံကုမ္ပဏီတွင် Unit Manager အနေဖြင့်လည်းကောင်း ၊ AYA SOMPO အာမခံကုမ္ပဏီတွင် အရောင်းအေးဂျင့် အဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်၍ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အာမခံအရောင်းကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ CHUBB ၏ 2020 ခုနှစ်အတွက် မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရောင်းအားအကောင်းဆုံး Top No.4 Agent Award ကိုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရပြီး .. လက်ရှိ 2021 တွင်လည်း ကမ္ဘာ့အာမခံလောကတွင် အထင်ကရအဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်သော MDRT အဖွဲ့အစည်းကြီးမှ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ရောင်းအားပမာဏကို ကျော်လွန်သွားပြီမို့ MDRT (Million Dollars Round Table) Member တစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ ရေပန်းစားလျက်ရှိပါသည်။
Price	90,000K	60,000K
Instructor	Richard Nay Lin
Enrolled	34 students